ऊ गुलाफको बुट्टा कुँदिएको मार्बलको सेतो, अग्लो भर्‍याङको सबैभन्दा तल उभिएको थियो। ऊ टाढा, धेरै टाढा एक टकले हेरिरहेको थियो। उसले हेरेको दृश्य यस्तो थियोः गरीबीको घुर्मैलो भीड बाढी आएको नदी झैँ मडारिइरहेको थियो। भीड उद्वेलित थियो, उम्लिइरहेको थियो।
साझा प्रकाशन अध्यक्षमा डा. विजय सुब्बा निर्वाचित
साझा प्रकाशनको २४औँ साधारणसभाबाट सञ्चालक समिति अध्यक्षमा डा. विजय सुब्बा निर्वाचित भएका छन्।
देश विजेताले मात्र होइन, पराजितले पनि बनाएका हुन् ! देश के हो ? आखिर देश भन्नु हाम्रो पुर्खाले देखेको एक सपना हो। जसले राज्य विस्तार गर्दा जिते, तिनले सायद आफ्ना सन्तान यो मुलुकमा फलून् फुलून् भन्ने सोचेका थिए। जसले त्यो बेला हारे र पराजय स्विकारेर यो मुलुकमा बस्ने निर्णय गरे, तिनले पनि लडिराख्नुभन्दा पराजय स्विकार्नुमै आफ्ना सन्तानको भविष्य देखेका हुँदा हुन्।
‘एन्टी जेम्स बन्ड’ झूट र विरोधाभाषलाई लेखनको मूल विषय बनाएका जोन ल क्यारेले जीवनमा थोरै मात्रै अन्तर्वार्ता दिए । आजीवन साहित्यिक पुरस्कार लिन अस्वीकार गरे । उनी पुरस्कारबाट होइन पाठकबाट लेखकको गुणस्तर थाहा पाउनुपर्ने विचार राख्थे ।
आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानद्वारा १४ पुस्तक सार्वजनिक आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानले विभिन्न विधाका १४ वटा पुस्तक सार्वजनिक गरेको छ।
आईएमई नेपाल साहित्य महोत्सव पुस दोस्रो साता आईएमई नेपाल साहित्य महोत्सवको नवौं संस्करण यही १४–१५ पुसमा (२९–३० डिसेम्बरमा)मा भर्चुअल रूपमा पोखरामा आयोजना हुने भएको छ।
‘भूपि पुरस्कार’ सुकुम शर्मालाई धौलागिरि साहित्य प्रतिष्ठान बागलुङले यस वर्षको ‘भूपि पुरस्कार’ लेखक एवं समालोचक सुकुम शर्मालाई प्रदान गर्ने भएको छ।
१३ महिलाको जीवन भोगाइ ‘म’ कथा संग्रह सार्वजनिक विभिन्न क्षेत्रमा काम गरिरहेका तर, सार्वजनिक रूपमा नआएका महिलाहरूको संघर्ष र सफलताको कथा ‘म’ नामक कथा संग्रह सार्वजनिक भएको छ। ‘म लेख्छु मेरो कथा’ अवधारणामा आफूलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर १३ महिलाहरूको कथा पुस्तकमा प्रकाशित भएको हो।
मानवता (कविता) अम्बेडकर स्मृति दिवस विशेष–कविता
निरञ्जन कुँवरको ‘बिट्विन क्विन्स एन्ड द सिटिज’ सार्वजनिक लेखक निरञ्जन कुँवरको अङ्ग्रेजी पुस्तक ‘बिट्विन क्विन्स एन्ड द सिटिज’ सार्वजनिक गरिएको छ। जुममार्फत शनिबार पुस्तकको भर्चुअल विमोचन गरिएको हो।
शान्तदासलाई विकल वाङमय र आहुतिलाई रमेश विकल सिर्जना पुरस्कार
रमेश विकल साहित्य प्रतिष्ठानद्वारा गठित समितिले गरेको सिफारिश अनुसार विकल वाङमय साहित्य पुरस्कार वरिष्ठ भाषासेवी शान्तदास मानन्धरलाई दिइने भएको छ। यो पुरस्कारको राशि रु.३० हजार छ।
यो वर्षको राष्ट्रिय कविता महोत्सव २९ मङ्सिरमा
नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानले यस वर्षको राष्ट्रिय कविता महोत्सव २९ मङ्सिरमा आयोजना गर्ने भएको छ।
रेशम विरहीको निबन्धसंग्रह ‘सत्ता र स्वप्नदोष’ प्रकाशित
रेशम विरहीको निबन्धसंग्रह ‘सत्ता र स्वप्नदोष’ बजारमा आएको छ।
जीवा लामिछानेको ‘देश देशावर’ सार्वजनिक गैरआवासीय नेपाली सङ्घ (एनआरएनए)का पूर्वअध्यक्ष एवम् उद्यमी जीवा लामिछानेको नियात्रा सङ्ग्रह ‘देश देशावर’ सार्वजनिक भएको छ। विश्वव्यापी रूपमा बढ्दो कोभिड–१९ को संक्रमणका कारण कुनै औपचारिक कार्यक्रम नगरी भिडिओमार्फत् बिहीबार पुस्तक सार्वजनिक गरिएको हो।
नदी जस्ता देवकोटा ​ मेरो सम्भवतः सबभन्दा धेरै गाइएको गीत, ‘गाउँछ गीत नेपाली’ मा भएका ‘सुन्दर शान्त विशाल’ शब्द मेरा होइनन्, देवकोटाजीसँग मागेको हुँ। निबन्धमा प्रयुक्त शब्द जस्ताको तस्तै गीतमा मिल्नु उहाँको काव्यात्मकताको प्रमाण हो। ​
भारतीय अध्येताको दाबीः 'शाकुन्तल'मा संसारकै एक देवकोटा ​कालिदास भन्दा विल्कुलै अलग शैली र संरचनासहित शाकुन्तल महाकाव्य रचनामा देवकोटाको अद्वितीय क्षमता देखिन्छ । एकै कविले यौटै कृतिलाई दुई भिन्न भाषाका तीन नयाँ कृतिमा पुनःरचना गर्ने साहित्यकार संसारमै देवकोटा मात्र हुन् ।
आर्यघाटमा देवकोटासँगको त्यो अन्तिम भेट ''त्यो मुहार कम्पित भयो, रुन खोजेर। दुवै ओठ त्यसपछि सँगै हल्लिए। मेरो पथका निम्ति शुभाशिष दिनोस्,’ देवकोटाले भने । वेद र म दुवैले निहुरेर उनका निधारमा म्वाई खायौं, उनको निधार उनको हात जस्तै थियो, चिसो भैसकेको । ठूलो प्रयत्नले आशिषदानमा उनले आफ्ना दुई हात उठाए । ‘मेरोनिम्ति प्रार्थना गर्नुहोला ।’ देवकोटाको मन्द आवाजले म झस्किएँ ।''
महाकविको ‘इच्छापत्र’ लेखकले आफ्नो कामको पारिश्रमिक ज्यादै नै थोरै पाउँछ । परन्तु यदि ऊ सच्चा लेखक हो भने उसले आफ्नो कार्य रोक्नुहुँदैन । उसले जनतामा भिज्नुपर्दछ, जनताबाट सिक्नुपर्दछ, समस्त मानव जातिको जीवनबोधका लागि र सबै वर्तमान समस्याहरू तथा घटनाहरूको अनुबोधका लागि जनताको आत्मा खोतल्नुपर्दछ ।
चोरी होइन ‘मुनामदन’ महाकवि देवकोटा रचित सर्वाधिक लोकप्रिय ‘मुनामदन’ खण्डकाव्य नेवारी लोकगीतबाट चोरिएको नभई मौलिक कृतिको पुनः सिर्जना हो ।
मातृकाप्रसाद कोइरालाको ‘कोशीको कथा’ पुनः प्रकाशित पब्लिकेसन्स नेपालयले आफ्नो क्लासिक्स् शृङ्खला अन्तर्गत सन् २०२० मा मातृकाप्रसाद कोइरालाको निबन्ध सँग्रह ‘कोशीको कथा’लाई नयाँ कलेबरमा प्रकाशित गरेको छ। प्रतिभा पुरस्कार प्रतिष्ठान, विराटनगरले २०४६ मा प्रथम पटक प्रकाशित गरेको यो पुस्तक लामो समयदेखि बजारमा उपलब्ध थिएन।
भुवनहरि सिग्देलको आख्यान ‘लालस’ बजारमा साहित्यकार भुवनहरि सिग्देलकोे नयाँ आख्यान कृति ‘लालस’ प्रकाशित भएको छ। ‘लालस’ सिग्देलको ३५औँ कृति हो। उनको आख्यानतर्फ भने नवौँ कृति हो।
मानव श्रेष्ठताको महावर्णन ‘आर्य हुनुको श्रेष्ठता’ विरुद्ध मानव हुनुको अस्तित्वबोध नै ‘मोक्षभूमि’ को मूल बहस हो। सतहमा नश्लीय अहंकार देखिए तापनि अन्तर्यमा चाहिं यो वर्गीय द्वन्द्व हो। किनकि, कृषि र व्यापारमा निर्भर मध्ययुगमा दास बेगर न उत्पादकत्व वृद्धि न त भोगविलास नै संभव हुन्छ।